FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CHIPIT - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Chipit
Alika mifangaro mifangaro Chihuahua / Amerikanina pit Bull Terrier
T.J. ny Chipit amin'ny 11 volana— Ny renin'i 'T.J. dia Chihuahua ary ny dadany dia Pit Bull. Taloha izy satria sahirana ny reniny nitondra azy sy ny iray tam-po aminy maty. Nikolokolo azy tao an-tranony voalohany aho satria ny reniny dia mpitsabo ary tsy fantatro izay zava-mitranga. Mahery setra be izy, be hozatra ary milanja 30 pounds. Milalao izy ary tia ny saina. '
Ny alika dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny American Pit Bull Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Dixie May ny Chihuahua SY Lavaka orona mena mifangaro alika— 'Tena manan-tsaina izy ary namantatra ny fomba fanokafana kennels. Tiany ny manjono sy milalao tosika. Ny alika mpiaro ahy indrindra niaraka tamiko tamim-pitiavana indrindra ary tiany ny mifamaly. '
'Ity i Chewy the Chipit lahy amin'ny 1 taona. Izy no tonga lafatra manerana ny alika sy ny mpianakavy. Izy dia alika anaty izay misy fatra ivelany. '
Chewy the male Chipit (Chihuahua / Pit Bull mix) 1 taona
Miloh the brindle miloko Chipit (Chihuahua / Pit Bull mix) ho alikakely 3 volana— 'Miloh manana rambony lava, lava vatana, tongotra fohy ary sofina maranitra. Manana ny endrik'ilay leoparda izy, mifangaro amin'ny volontany, mainty ary volontany maivana. Matanjaka be izy ary tsy mikotrana be, ary mailaka sy sariaka '
'Miloh dia 50% Pit Bull ary 50% Chihuahua. Izy dia sary amin'ny 9 herinandro sy 8 lbs. Mpianatra tena haingam-pandeha, nozarina tamin'ny andro iray. Potty voaofana amin'ny 6 herinandro. Mahalala ny fomba haka, mipetraka ary mihozongozona. Sariaka amin'ny ankizy sy ny haben'ny alika izy ary tia fiaraha-monina. Tsy mivofoka izy ary kely fotsiny no mimenomenona. Filana lehibe. Tiany ny miverina akaiky sy manokana. Tsy milentika na mip. Alika fonenana tsara. Mahavita irery irery. Toetra tsara. Docile. Manana alikaola henjana amin'ny alika aho ary afaka miforitra araka izay tadiaviko amin'i Miloh tsy misy soritr'aretina.
Miloh the Chipit (50% Pit Bull ary 50% Chihuahua) amin'ny alika kely mandritra ny 9 herinandro sy 8 lbs.
Hijery ohatra hafa momba ny Chipit
Sary Chit Dog Dog Breed 1
mpanao ady totohondry voaharo ny pitbull
fisaka mifono retriever newfoundland mifangaro
zanak'alika alika tendrombohitra bernisy volamena
fampahalalana momba ny alika ondry anglisy taloha
yorkshire terrier mifangaro amin'ny chihuahua